QR Code Scanner | QR Code ကိုအခမဲ့ Scan ဖတ်ပါ• Pageloot
QR ကုဒ် Scanner
QR Code အခမဲ့ရယူပါ
လုပ်ဖို့လိုတယ် တစ်ဘားကုဒ် scan အစား?
QR Code ကိုမည်သို့စကင်ဖတ်ရမည်နည်း
နှင့်အတူ QR ကုဒ်များ scan iPhone
နှင့်အတူ QR ကုဒ်များ scan iPad နှင့် Tablet
နှင့်အတူ QR ကုဒ်များ scan PC & Mac
သင်၏ QR ကုဒ်များကိုသိမ်းပါ
အကောင်းဆုံး QR Code Reader သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
သင်၏ Scan များအားလုံးကိုခြေရာခံပါ - Pageloot ကိုသုံးပါ QR Code Scanner သင်၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုများစာရင်းကိုသိမ်းဆည်းရန်ကိရိယာ။ QR Scanner သမိုင်းကိုဖွင့်ရန်အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ။
အန္တရာယ်ကင်းစွာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ - အန္တရာယ်ရှိတဲ့လင့်ခ်များကိုရှောင်ပါ။ စကင်ဖတ်ထားသောအကြောင်းအရာများသည်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသေချာပါစေ။ QR Scanner ကလုံခြုံစိတ်ချရသောကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုကိုပြသပြီး၎င်းကိုသင်အတည်ပြုနိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံကိုသင်၏ QR ကုဒ်များသို့ယူဆောင်ပါ - သူတို့ကိုလွယ်ကူစွာအုပ်စုဖွဲ့နိုင်သလို tags များဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။ ရှာဖွေရန်နှင့်စစ်ထုတ်ရန်အတွက်သင်လိုအပ်သောကုဒ်များကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေပါ။
Scan History ကိုသိမ်းပါ
အခမဲ့ QR Code Scanner App
Pageloot ၏အမှတ်အသားပြုသိမ်းဆည်းပါ QR Code Reader & QR Code Generator iPhone သို့မဟုတ် Android အတွက်။
သင်၏ home screen တွင် bookmark ကိုထည့်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤစာမျက်နှာသည်ဇာတိကဲ့သို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် QR code ဖတ်စက်နှင့်စကင်နာ အက်ပလီကေးရှင်း။
အလွယ်တကူငါတို့လက်လှမ်းမှီ အခမဲ့ QR ကုဒ်စာဖတ်သူ အွန်လိုင်း. သင်၏ QR Code စကင်မှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းရန်သင်လော့ဂ်အင်ဝင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။
"ဒါကကျွန်တော့်ကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားတယ်။ QR code ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ "
Karen Sable၊HipGlam မှ
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနည်း QR ကုဒ်များ လုံလုံခြုံခြုံ
QR Code သည်မည်မျှလုံခြုံမှုရှိသနည်း။
သင်၏ Scan များကိုစစ်ဆေးရန် Pageloot QR Scanner Tool ကိုသုံးပါ။ ငါတို့ SafeScan feature ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ် QR Code လင့်များရဲ့ contents preview ။
ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့် QR ကုဒ်လိုအပ်သနည်း။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မျှဝေ။ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများသို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုပြောင်းလဲရန် QR ကုဒ်များကကူညီနိုင်သည်။
QR Code ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
ငါတို့သုံးနိုင်တယ် အခမဲ့ QR Code Generator အက်ပ်။ သင်လုပ်ရန်မှာသင် QR Code တစ်ခုဖန်တီးချင်သောအချက်အလက်များကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ - QR ကုဒ်များဖြစ်သည် အသုံးပြုရန်လုံးဝအခမဲ့ဖန်တီးပြီးထုတ်ဝေပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ကိရိယာများကိုကြည့်ပါ။
QR Code ၏အများဆုံးအရွယ်အစားကဘာလဲ။
QR ကုဒ်များရှိသည် အကန့်အသတ်မရှိ ကသူတို့ရဲ့အများဆုံးရှုထောင့်မှကြွလာသောအခါ။ သင်သည် vector ပုံစံတစ်ခုကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုအဝေးမှဖတ်ရှုနိုင်သည်။
QR သည်“ Quick Response” ကိုဆိုလိုသည်။ QR ကုဒ်များသည်မည်သည့်စကင်နမ်စက်သို့မဆိုမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်တင်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၄ င်းတို့ကို ၁၉၉၄ တွင် Denso Wave မှ Toyota အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ ဝီကီပီးဒီးယား.
QR သည်ဘားကုတ်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားမဟုတ်သော်လည်းသင်နှင့်ဖောက်သည်များပိုမိုရရှိရန်သင်အသုံးပြုသင့်သည်။ ScanLife, EZcode, DataMatrix နှင့် Microsoft Tag ကဲ့သို့သောဘားကုတ်အမျိုးအစားများရှိသည်။
QR Code နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးအများဆုံးမှာစမတ်ဖုန်းကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အချို့သောစမတ်ဖုန်းများတွင် QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။ အချို့မှာအထူးအက်ပလီကေးရှင်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် QR Code Scanner အက်ပလီကေးရှင်း.
QR Code သည်အရောင်များရှိပါသလား။
QR ကုဒ်များ မည်သည့်အရောင်ရှိနိုင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နောက်ခံကနေဖတ်လို့ရအောင်အဖြစ်။ ၎င်းတို့တွင်မတူညီသောအရောင်များ၊ ပုံစံများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး QR Code မီးစက်ဆိုတာဘာလဲ။
QR ကုဒ်များသည်အွန်လိုင်းထုတ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အခမဲ့သုံးနိုင်သည် QR Code Generator။ အင်္ဂါရပ်အားလုံးသည်အမြဲတမ်းအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သည်။
QR Code ဘယ်လောက်သေးလဲ။
၎င်းသည်အကွာအဝေးနှင့်ကင်မရာအရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။ QR Code ၏အနည်းဆုံးပုံနှိပ်အရွယ်အစားဖြစ်သင့်သည် အနည်းဆုံး2x2စင်တီမီတာ (3/4 x 3/4 လက်မ) ။
ယခု Pageloot ကိုစမ်းကြည့်ပါ
နောက်ဆုံး QR Code သတင်းများ
ဘားကုဒ် vs QR Code
အတွက် QR ကုဒ်များ Construction
အတွက် QR ကုဒ်များ ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်
သင်၏ QR ကိုသိမ်းပါ